मतपेटिकादेखि मसीसम्म चिनियाँ ! यस्ताे छ बाध्यता – Everest Dainik – News from Nepal
मतपेटिकादेखि मसीसम्म चिनियाँ ! यस्ताे छ बाध्यता
काठमाडौं, कात्तिक २८ । निर्वाचन आयोगले यसपटक ‘अति संवेदनशील’ निर्वाचन सामग्री चीनबाट आयात गरेको छ । अति संवेदनशील सूचीमा रहेका अधिकांश सामग्री यसअघि आयोगले भारतबाट ल्याउने गरेको थियो भने अन्य दाताबाट समेत सहयोग लिने गरेको थियो।
ट्याग्स: nirbavhan aayog
पश्चिमी वायु बुधबारबाट फेरि नेपाल भित्रिने
१३ औँ सागः नेपालविरुद्ध माल्दिभ्सको राम्रो सुरुवात